कृषि कर्जामा किसानले चासो देखाएनन् : गभर्नर नेपाल – Newsagro.com :
January 20, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture, Bank, Dr. chiranjibi Nepal Governor, kathmandu, Nepal, Newsagro.com
व्यवसायी भन्छन्–राष्ट्र बैँकले भने जस्तो सहजै लिने अबस्था छैन
काठमाडौं, ६ माघ /नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले कृषि कर्जाका लागि आवेदन नपरेकोमा गुनासो गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले चैत महिनादेखि लागू गरेको कृषिमा कर्जा अहिलेसम्म व्यापारिक बैंकबाट १३ सय ३६ जनाले ८९ लाख ऋण लिइसकेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकको तर्फबाट २८ लाख ऋण कर्जा लिइसकेका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले सरकारले ब्याज अनुदान दिँदा तथा राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा पुनकर्जाको व्यवस्था गर्दा पनि कृषि कर्जाका लागि आवेदन नपर्नु चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि घरघरमा गएर कर्जा नदिने भन्दै कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरुलाई सरकारी नीतिबाट लाभ लिन आग्रह गरे।
गभर्नर डा. नेपालले मुलुकलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनकै लागि ब्याज अनुदान र १ प्रतिशतमा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिएको भन्दै कृषि क्षेत्रमा कर्जा दिन आनाकानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने बताए। उनले सरकारले हालै स्थापना गरेको पुनउद्दार कोषबाट कृषि क्षेत्रमा थप सहुलियतका कार्यक्रम आउने पनि बताए।
नेपालमा गएको वर्ष २४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको चामल तथा ८ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो। गभर्नर डा. नेपालले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा व्यवसायीहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि हिच्किचाउन आवश्यक नरहेको बताए। उनले नाकाबन्दी र अन्य कारण देखाएर ऋण मिनाहा गर्न भने कुनै हालतमा नसकिने बताए।
कार्यक्रममा अस्ट्रिज व्यवसायी सीपी शर्माले कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नहटाएसम्म कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताए। उनले भने–‘राष्ट्र बैँकले निर्देश जारी गरेपनि बैँकहरुले ऋण दिन भने सहजरुपमा सकेका छैनन्।’
← कृषि वैज्ञानिकको सुन्दर भविष्य
भारतले रोकेपछि बंगुरपालन जोखिममा →
यो समाचार 35135 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34748 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 26063 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6807 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले